Danmark waxay hadda bixisaa tallaalka 4-aad ee COVID-19 muwaadiniinta ' nugul'
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Denmark War Deg Deg Ah » Danmark waxay hadda bixisaa tallaalka 4-aad ee COVID-19 muwaadiniinta ' nugul'
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Denmark War Deg Deg Ah • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Tallaalka dheeriga ah ayaa la heli doonaa laga bilaabo dabayaaqada usbuucan kuwa leh xaalado hore u jiray oo hore u lahaa xoojiye bilow ah dayrtii hore, sarkaalku wuu sii watay. Dawladdu waxay sidoo kale hadda tixgelinaysaa qiyaas kale oo loogu talagalay muwaadiniinta waayeelka ah iyo dadka deggan guryaha waayeelka, in kasta oo aysan weli go'aan gaarin.
Wasiirka caafimaadka Denmark Magnus Heunicke ayaa shaaca ka qaaday in wadanku uu dhawaan siin doono tallaalka afaraad ee COVID-19 ee muwaadiniinta 'khatarta sare leh'.
Denmark noqon doona kii ugu horeeyay Yurub waddanku inuu sidaas sameeyo inkasta oo hagaha digniinta ah in aanay jirin xog cilmiyeed ku filan oo lagu ogaan karo hubaal haddii siyaasadda cusubi ay caawin doonto dadka loo arko inay halis sare ugu jiraan fayraska COVID-19.
"Waxaan hadda bilaabaynaa cutub cusub, kaas oo ah go'aan ah in aan siino tallaalka afaraad ee muwaadiniinta aadka u nugul," Wasiirka caafimaadka Magnus Heunicke ayaa u sheegay suxufiyiinta Arbacadii, isagoo raaciyay "in kasta oo uu cudurku ku sii faafayo bulshada dhexdeeda, khatarta weyn ayaa sii kordheysa. in infekshanku uu gaari doono kuwa ugu nugul."
Tallaabadan ayaa timid maalmo ka hor qorshe dib loogu furayo tiyaatarada filimada, goobaha muusikada, garoomada ciyaaraha iyo meelaha kale ee dadweynaha - xannibaado markii ugu horreysay la soo rogay bishii hore iyadoo la rajaynayo in la joojiyo faafitaanka kala duwanaanshaha Omicron. Halka Denmark waxay sii wadaa inay aragto mowjad caabuqyo cusub ah oo la xidhiidha isbeddelka, dhimashada iyo isbitaallada ayaa weli aad uga hooseeya heerkii ugu sarreeyay ee la arkay sannadkii hore.
In kasta oo Copenhagen ay ka gaabisay dib u soo noolaynta xannibaadda buuxda ee ka falcelinta Omicron oo ay sheegtay inay jeclaan lahayd inay “sii furnaadaan inta ugu badan ee bulshada,” xannibaadaha ugu dambeeyay si kastaba ha ahaatee waxay kiciyeen mudaaharaadyo kulul oo ka dhacay caasimadda waddanka, iyadoo boqolaal la arkayay iyagoo u socda si ay u cambaareeyaan. ah deenishka, "sharciga faafa" dhammaadka wiigga.
Israa'iil waxay ka mid ahayd dalalkii ugu horreeyay ee adduunka ah ee daaha ka qaaday tallaalka afraad ee dadka deggan, waxaana ku xigtay Chile horaantii toddobaadkan.
Hungary waxay sidoo kale ka baaraandegaysaa inay sidaas oo kale samayso iyo in kale, halka khubarada Austria ay soo jeediyeen qiyaasaha afraad ee "ka baxsan calaamadda", in kasta oo ay walaac ka muujiyeen Midowga YurubMaamulaha daroogada, Wakaaladda Daawooyinka Yurub (EMA).
EMA waxay dhawaan ka digtay in aysan jirin xog ku filan oo lagu ogaanayo haddii tallaalka afraad uu faa'iido u leeyahay, iyada oo sarkaalkeeda ugu sarreeya ee tallaalka Marco Cavaleri uu su'aal ka keenay in "talaalada soo noqnoqda ee muddo gaaban gudaheed" ay tahay "istiraatiijiyad mustaqbalka fog ah."